सदस्य सचिव त्याग्ने की नैतिकता गुमाउने ? « KhelkudNews.com
Published On : 12 July, 2020 9:02 pm
नयाँ खेलकुद ऐन सँगै पदावधि सकिएका राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्(राखेप)का निवर्तमान सदस्य सचिव रमेश सिलवालको कार्यकालको समीक्षा भइरहेको छ । एकातिर यो समीक्षाको क्रम जारी रहेको छ भने अर्को तर्फ अबको नेतृत्व कसको ? भन्ने बहस पनि सुरु भएको छ । नयाँ ऐन अनुसार सदस्य सचिव चयन गर्न सरकारको तर्फबाट छनोट समिति पनि गठन भइसकेको छ । यसका साथै दरखास्त आहान पनि भइसकेको छ । यस बिचमा निवर्तमान सदस्य सचिव रमेश सिलवाल फेरी सदस्य सचिवको तयारीमा रहेको समाचार बाहिर आइरहेका छन् । यस बिचमा उनका बारे केही प्रसङ्ग उठेका छन् ।
सर्व प्रथम त काठमाडौँमा सम्पन्न १३ औ दक्षिण एसियाली खेलकुद(साग )खेलको हिसाब किताब सार्वजनिक गरिएको छैन । यस अघि पदभार ग्रहण गर्ने बित्तिकै आफूलाई पैसाको कुनै लोभ लालच नभएको बताउने सिलवाल माथि आर्थिक सवालमा भने छोटो समयमा नै प्रश्न उठाउन सक्ने थुप्रै पाटाहरू देखिए । अख्तियारमा उजुरीको चर्चा चली रहेको समयमा उनले यो आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा पनि साग खेलको हिसाब देखाउन नसक्नु महत्त्वपूर्ण विषय भएको छ । त्यसो त साग खेलको आयोजना गरेकै कारण जस लिने सदस्य सचिवका बारे एउटा प्रश्न उठाउनै पर्ने हुन्छ । सार्वजनिक खरिद ऐन लागु गर्न नपर्ने सरकारी निर्णय अन्तिम समयमा सामान खरिद गरिएको थियो । एकातिर अख्तियारको चर्चा, अर्को तर्फ हिसाब सार्वजनिक गर्न नसक्नु र सार्वजनिक खरिद ऐन लागु नभईकनै सामान खरिद हुनु लगायत विषयमा उनका बारे चर्चा परिचर्चा चलेको छ ।
श्रोतका अनुसार उनले खरिद गरेको १७०० जोर ट्रयाकसुट अझै डम्प भएर बसेका छन् । अन्तिम समयमा कर्मचारीलाई विभागीय हेरफेर गर्ने क्रममा भण्डार शाखाका प्रमुख परिवर्तन गर्ने काम गरेका सिलवालको नियत नै खराब रहेको अहिले प्रमाणित रहेको जनाइन्छ । विगत लामो समय देखि उनलाई नजिकबाट नियाल्ने एक खेल अधिकारी भन्छन्, “जसरी कर्मचारीतन्त्र हेरफेर भयो र सामान खरिद गर्दा आवश्यकता भन्दा बढी गरियो यसले उनको नियत प्रस्ट पारेको छ । ”ती अधिकारीको कथन छ, “ ३५ दिनमा हिसाब सार्वजनिक गर्छु भन्ने सदस्य सचिवले अझसम्म न हिसाब सार्वजनिक गर्न सके न त पेस्की फर्छ्यौट गर्न सके ।
सिलवालले कर्मचारीतन्त्रमा पनि आफ्नो अनुकूल हेरफेर गरेका थिए । यो हेरफेरको क्रममा भण्डार शाखामा परिवर्तन गर्नु नै सामान खरिदमा कमिसन सहज बनाउनु भन्ने पनि रहेको छ । यो सँगै सुटिङ खेलका लागि नपड्किने बन्दुक खरिद गरे पछि उनको कार्यकालमा खरिद गरिएका हरेक सामानको गुणस्तरका साथै यसको वास्तविक मूल्यका बारे प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा उनले केही छापामा आफू दरखास्त दिएर सदस्य सचिव नहुने बताउँदै आएका छन् । यस कारण उनीमाथि दरखास्त दिन नैतिक दबाब त छदैछ । खुलम खुला दरखास्त दिएर सदस्य सचिव नहुने हवाला दिने सिलवालले दरखास्त दिए उनको नैतिकता माथि त प्रश्न चिन्ह उठ्ने नै छ । साथै, व्यक्तिगत फाइदाका जे जस्तो पनि गर्न पछि पर्दैनन् भन्ने उनी माथि विपक्षीले लगाउने आरोपमा पनि थप बल पुग्ने छ ।